Usabhacile undlunkulu kaJG Shembe - Ilanga News
Home Izindaba Usabhacile undlunkulu kaJG Shembe
Uthi abaseBuhleni bamsola ngokubadayisa eThembezinhle
OKWESOBUNXELE ngumholi wohlangothi lwaseBuhleni uNyazilwezulu kanti kwesokudla ngumholi waseThembe-zinhle uKukhanyakwela-nga.
UDINDA isililo undlunkulu owayegane iNkosi Johannes Galilee “Ilanga” Shembe eseyakhothama, okumanje usekubhaceni emuva kokusinda ehlaselwa ngamalungu ebandla ohlangothi lwaseBuhleni. Kuthiwa la malungu abefuna ukumjuqa emzini wakhe, wasizwa wukuphuma ngesamagundane wayocasha, ngesikhathi kunenkonzo yesabatha ngoMgqibelo odlule.
Undlunkulu Nikeziwe MaNcanana Shembe, owayegane le nkosi eyaba ngeyokugcina ukuhola leli bandla lisahlangene futhi idume ngelikaJG, uthi namanje akalazi icala lakhe njengoba ahlaselwa emuva kokuvakasha kwendodana yakhe, iNkosi Phinda “Kukhanya-kwelanga” Shembe yaseThembe-zinhle. Yavakasha emzini wakhe onethempeli okukhonzela kulona amalungu aseBuhleni.
“Kangazi noma kakusafanele yini ngivakashelwe ngabantwana bami emzini wami ngenxa yombango ongathi shu ebandleni.
“Mina inkosi yaseThembezinhle yingane yami, neyaseBuhleni yi-ngane yami. Nakuba le yaseThembezinhle isiphinde yaba yinkosi yethu sonke njengoba inkantolo yanquma.
“Ngeke ngikuvimbe ukuvakasha kwamadodana ami kubo ngoba lo muzi weLanga kukubo. Inkosi uNyazilwezulu ike yafika lapha kwangaba nankinga yaze yangithengela ngisho igilosa yokudla.
“Uma sekufika eyaseThembezinhle sengiyabulawa? Kuthiwa ma-ngiyitshele ukuthi kabayidingi la emzini kayise wayo, yinto enjani leyo?
“Mina wumuzi wami lona, ngashada nenkosi ngineminyaka ewu-16 ubudala, ngiyintombi. Selokhu ngashada kangikaze ngihlale kwenye indawo ngaphandle kwakulo muzi engawakhelwa yinkosi, ma-nje kuthiwa mangiphume emzini wami ngoba ngizobulawa, ngibula-welwa ukuthi ngikhonza eThembezinhle.
“Kumanje ngiyezwa kuthiwa bankanisile emzini wami nezibha-mu, balinde ukuzobulala mina. Kangisabafuni, mabaphume bona bayokhonzela kwenye indawo, kangisabadingi emzini wami ngoba bakhombisile ukuthi kakubona abantu, bayizilwane,” kusho
Uthi okumcasula nakakhulu yizinto abafike bazenza emzini we-nkosi, bephihliza amafasitela, be-bulala izicabha bethi bazobulala iphekula.
“Izithombe zeNkosi Ilanga ebezisodongeni bazethula baziphihliza phansi, bazidabula.
“Bantshontsha izingubo zami zokulala nokudla. Into engenziwa ngamakholwa leyo? Bazophinda ngesabatha bazomemeza emzini wami bezothandaza bengihlukumeze kanje.
“Kangisabafuni, mabahambe bayokwenza ithempeli kwenye indawo, kangisabadingi nje emzini wami. Ngesabatha ngifuna ukubuyela emzini wami, kungcono bangibulalele khona kunokuthi ngifele la ezintabeni, ngibulawa wubuhlungu benhliziyo.
“Umshumayeli (amgagule ngegama) kuthiwa noma sengihambile ufikile ezinganeni wazothi uma ngingabuyela ekhaya kukhulu okuzongethusa, abasangidingi, nga-kho-ke ka-ngisenendaba maba-ngibulale ngikhathele ukuhlukumezeka,” ku-sho undlu-nkulu edi-nda isililo.
Okhulu-mela uhla-ngothi lwaseThembezinhle, uMnu Nkululeko Mthethwa, uthe sebezwile ukuthi kufike abaseBuhleni bahlukumeza undlunkulu emzini wakhe.
Uthi kubaphatha kabi ukuhlukunyezwa komuntu wesifazane ongundlunkulu womholi abamhloniphayo, ehlukunyezwa ngabantu abazibiza ngamakholwa.
Okhulumela ibandla laseBuhleni uMnu Thokozani Mncwabe, uthi beyibandla babahlonipha kabi oNdlunkulu beNkosi Ilanga.
“Siyibandla kasiha-mbasani nale nto yobudlova okuthiwa yenzekile, engi-ngenaso isiqiniseko sokuthi yenzeke ngempela. Bengizocela ugogo axhumane nomshumayeli, baxoxisane. Ngiyethemba amaphoyisa azo-kwenza ubulungiswa, kutholakale isixazululo, undlunkulu abuyele emzini wakhe,” esho.
Okhulu-mela amapho-yisa KwaZulu-Natal uCol Thembeka Mbhele uthi kuvulwe icala lokugqekeza kodwa okwamanje akekho osaboshiwe njengoba udaba lusaphenywa.
Previous articleKuzobongwa nezinyanya ngempumelelo yoKhozi FM
Next articleIDowns seyiphupha nge-treble kwiPSL